KMF/Cnoe : “Mila fanatsarana ny fitantanana firenena” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Mila fanatsarana ny fitantanana firenena”
Vita iny ny fifidianana teny anivon’ny kaominina. Hanao ahoana ny ho avy? Mila fanatsarana ny fitantanana fiainam-pirenena, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
“Hatsarao ny fitantanana ny fiainam-pirenena ry mpitondra isan’ambaratonga mba haharesy lahatra ny vahoaka ka hiverenan’ny fifampitokisana eo aminareo mpitondra sy ny entina.” Io ny anisan’ny tolo-kevitry ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, notarihin’ny filoha nasionaliny, Andriamalazaray Andoniaina, tamin’ny fanambarany ny”Demokrasia hafahafa” teny Antanimena, omaly, taorian’ny fanaraha-maso ny fifidianana kaominaly.
Mila asehon’ny mpanao politika fa azon’ny vahoaka ianteherana izy ireo. Tokony hohajaina ny lalàna na amin’ny zon’ny mpifidy ihany aza mba tsy hilazana hoe ny zon’olombelona. Tsara ampiharina ny lalàna: ny And. 116 amin’ny lalàna fehizoro 2018-008 mifehy ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fanasaziana ireo rehetra nandika lalàna, ohatra. “Fehezo ny fikirakirana sy ny fitantanana ny fifidianana ary ny fiainam-pirenena”, hoy ny fanambarana.
Fanamby lehibe ho an’ny rehetra ny famerenana ny olom-pirenena ho tomponandraikitra amin’ny fiainam-pirenena. Tsy ho tratra izany raha tsy ny rehetra no mametraka ny tombontsoa iombonana ho ambony lavitra no ho ny tombontsoa manokana.
Nitombo ny fahasahian’ny olom-pirenena
Nitombo ny fahasahian’ny olom-pirenena namaky bantsilana ireo tsy fanarahan-dalàna taorian’ny fifidianana: fitoriana eny amin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana, fisehoana sy fijoroana vavolombelona amin’ny tambajotra sosialy, fizarana sy fanapariahana vaovao…
Nandritra ny fizohiana ny voka-pifidianana teny anivon’ny SRMV miisa 114, tsikaritra ny tsy fahatomombanana tamin’ireo antontan-taratasy tonga sy noraisina. Araka izany, voatohintohina ny zon’ny mpifidy. Mihalangalana sy mampiseho fandavana goavana ny momba ny raharaham-pitondrana sy ny raharaham-pirenena ny olom-pirenena. Tsy matoky loatra intsony ny rafi-pitantanana ny olom-pirenena ka mahatonga ary hihemotra amin’ny fandraisana andraikitrra manoloana ny raharaham-pirenena.
Izany rehetra izany, mila fanatsarana ny fitantanana ny fiainam-pirenena.